हिमानी शाह छोरा हृदे’यन्द्र सहित मिडियामा, छोरा भए यत्ति ठुलो जन’ताले राखे ठु’लो आश-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमाडौ । पूर्व युव’राज पारश शाह र पूर्व युव’राज्ञी हिमानी शाहका छोरा हृदयन्द्र प्राय जसो सार्व’जनिक कार्य’क्रममा हजूरबुवा ज्ञानेन्द्र शाह र आमा हिमानीका सा’थमा देखिन्छन् । भर्खर १७ वर्ष लागेका उनी शनिबार एक सामाजिक कार्यक्रममा आमासँग देखिए ।
पूर्व यु’वराज्ञी हिमानी शाह र चर्चित ना’यिका मनिषा कोइराला एकसाथ सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेका छन् । कोइराला हिमानीसँग देखिँदा धेरैलाई अचम्म लागेको छ । शनिबार विहान हिमानी ट्रष्ट’की अध्यक्ष समेत रहेकी पूर्व युव’राज्ञी हिमानीले प्राथमिक बिद्यालयमा अध्ययनरत बालबा’लिकालाई शैक्षिक सामाग्री बितर’ण गरेकी हुन् ।
काठमाडौको सिद्धेश्व’र माध्यमिक बिद्या’लयमा अध्य’यनरत बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री बितरण गरिएको उक्त कार्यक्रममा हिमानी र मनिषाले एकसाथ स्टेज सेयर गरे । गरिबीका कार’ण बालबालिका पढ्नबाट बन्चित नहुन भन्ने उद्धेश्यले हिमानी ट्रष्टले आज एक कार्यक्रमकाबीच बालबा’लिकालाई शैक्षिक सा’माग्री बितरण गरेको हो ।
ट्रष्टले स्कुल ब्याग, कपी, पुतक’सहित शैक्षिक सामाग्री बितरण गरेको हो । ट्रष्टले ग्रामीण दुरदराजमा रहेका बालबालिकालाई बिद्यालयजाने बातावरण बनाउन बिभिन्न सहयोगसमेत गर्दे आएको छ । ट्र’ष्टले शिक्षा, स्वास्थ्य’को क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दे आएको छ ।
बलिउड नायि’का मनिषा कोइराला पनि कार्यक्रममा उपस्थि’त थिईन् । ला’यन्स ब्लब अफ काठमाडौँ युनिक र हिमानी कोषको संयुक्त आयोजनामा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नुको साथै रक्तदान एवम् स्वास्थ्य परीक्षण शिवीर पनि संचालन गरिएको थियो । हि’मानी कोष सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहँ’दै आएको छ ।
त्यस्तै हि’मानी कोष तथा लाय’न्स कल्ब अफ काठमाडौँले शनिबार तीनकुनेमा आयोजना गरेको रक्तदान तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रममा देखिएका हृदयन्द्रको मूहार हसिलो र चम्किलो देखिन्थ्यो ।
कार्य’क्रममा हृद’यन्द्रले रक्तदान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए तर चिकि’त्सकले उमेर नपुगेको सल्लाह दिएपछि उनले रक्तदान गरेनन् । हृदयन्द्र हाल कं’लकीस्थित लिंक’न कलेजमा कक्षा १२ मा पढिरहेका छन् ।
Prev“नेपाली हामी रहौँ’ला कहाँ नेपा’लै नरहे” भन्ने गित गाउँदा गाउँदै, द भ्वाइस अफ नेपा’लमा भक्का’नो छोडेर रो’इन मेचु- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
Nextअन्ततः अमेरीका पुगेर मेघा घिमिरेले राखिन कृतिम हात, यस्तो देखियो- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
जोन तामांग भेटेको एकसाता नहुदै फेरि हराए अर्का दुई वालक, स्कूलकै लाहपरवाहीले विक्रम तामाङ र रविन्द्र गुरुङ वेपत्ता ?
१५ बर्षकी किशोरीलाई २० जना केटाले पटक पटक बʼलात्का र गरे ! शिशिर भण्डारी सहयोग लिएर पुग्दा श्रीनेहाले दर्नादʼ क कथा सुʼनाईन् (भिडियो सहित)